Waa Kuwee TOBANKA Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Axad Ah Loogu Hadal-Heynta Badan Yahay Suuqa Kala Iibsiga? Halkaan Ka Aqriso Liiska Oo Dhameystiran. - Laacib.net
Salamu calaykum waraxmatulaah, Ramadaan Kariim dhamaan akhristayaasha sharafta iyo ixtiraamka naga mudanow ku soo dhawaada barnaamujkeenii tobanka ciyaartoy ee ugu qiimaynta sareeya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee maanta oo Axad ah kuwaas oo inta ugu badan looga hadlay suuqa kala iibisaga isla markaana lala xiriirinayo kooxo cusub. Suuqa kala iibisaga ciyaartoyda ayaa si rasmi ah u furmaya 1-da July waxayna koox kastaaba si hordhac ah ugu dadaaleysaa iney hesho saxiixyo cusub.
Musalsalka Jermain Defoe wali lama soo afjarin taasoo ka dhigan inuu wali ugu sareynayo liiska ciyaartoyda loogu hadal heynta badan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda duhurnimadaa.
Sidoo kalena Real Madrid waxey dar-dar galisay wararka la xiriirinaya Theo Hernandez kaas oo la filayo in isbuucaan gudahiisa lasoo afjaro sheekadiisa waana daafac bidix oo waxtarkiisa ku muujiyay Deportivo Alaves oo uu amaah ku qaatay.
Mohamed Salah ayaa ka mid ah liiska tobanka ciyaartoy ee maanta laga hadal hayo suuqa, kaas oo ku dhaw inuu dhameystiro ku biiritaanka Liverpool, halka Marco Verratti sheekadiisa aad loo hadal hayo xidigaan wuxuu PSG ka dalbaday in la iibiyo – Barcelona ayaana ugu cad-cad.
Manchester United kama dhamaato liiskaan – walina waxey maaro u la’dahay soo afjaridda Ivan Perisic iyo Alvaro Morata heshiiskooda.